Data yekugovera - International Writing Centers Association
Iri peji rakazvipira kugovana data rekunyorera. Kana iwe uchida kuti tibatanidze kune yako dataset kana repository, ndapota zadza fomu pazasi pepeji. Ita shuwa kuti meseji yako inosanganisira tsananguro yedhata, webhusaiti kana URL kwainogona kuwanikwa, uye zita rayo.
The Writing Center Session Note Data Repository ndicho chigadzirwa chekubatana pakati peGenie Giaimo, Christine Modey, Candace Hastings, naJoseph Cheatle, vakawana rubatsiro rweIWCA 2018 rwe "Kugadzira Gwaro Repository: Ndeapi Session Notes, Mafomu Ekutora, uye Zvimwe Zvinyorwa Zvinogona Kutiudza nezveBasa Rokunyora. Centers."
Iyo Writing Center Roots Project ispredishiti rakanyorwa naSue Mendelsohn rinonyora zviuru zvenzvimbo dzekunyora pasi rese nemakore azvakatangwa. Iwe unogona kuwedzera nzvimbo yako yekunyora kune spreadsheet nekuzadza iyo Yekunyora Center Yekutanga Mazuva Fomu.
Writing Center Yegore Nevadzidzi Yekushanyira Mishumo. Gwaro iri rinosanganisira zvinongedzo kune yekunyora data data nezve kushanya kwegore. Iwe unogona kuwedzera data nezve nzvimbo yako yekunyora yekushanya kwepagore nekuzadza iyo Fomu reMshumo Wekushanya Kwegore Kwenzvimbo Yekunyora.
Zita kana Mazita eVabatsiri(Kunodiwa)
URL (panogona kuwanikwa zvirimo)(Kunodiwa)